Global Voices teny Malagasy » Mikatona tsy nahavita namaha ireo olana sarotra ny NETmundial · Global Voices teny Malagasy » Print
Mikatona tsy nahavita namaha ireo olana sarotra ny NETmundial
Voadika ny 01 Septambra 2019 12:34 GMT 1	 · Mpanoratra Sarah Myers West Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Sylvia Aimée
Sokajy: Brezila, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Marianne Diaz sy Sarah Myers no olona nalefan'ny Advox manokana tamin'ny fihaonamben'ny NETmundial  mikasika ny fitantanana erantany ny Aterineto, natao tamin'ny 23 sy 24 aprily 2014 tao Sao Paulo, Brezila. Mpisolo tena an'ireo fiarahamonim-pirenena sivily, ireo orinasa sy ireo governemanta erantany no nifanakalo hevitra mikasika ny fitantanana ny Aterineto amin'ny hoavy ao anatin'ny vanim-potoana taorian'i Snowden. Ity lahatsoratra ity no voalohany tamin'ny andiany  natokana ho an'ilay hetsika [Rohy amin'ny teny anglisy].
Mitodika amin'ireo nanatrika ny NETmundial i Dilma Rousseff. Sary Sarah Myers.
Ny alin'ny 24 Aprily 2014, nifarana tamin'ny fandefasana ilay fanambarana tsara antsoina hoe Fanambaràna Iraisan'ireo Mpiara-miombonantoka tao Sao Paulo [Multistakeholder Statement of Sao Paulo , pdf].. ny fivoriana mikasika ny NETmundial. Ho an'ireo fiarahamonim-pirenena sivily, kely tsy araka ny nantenain'ny rehetra ny fanantenana hisiain'ny dingana hahatongavana  amin'ny resaka zo ety amin'ny Aterineto.
Tsy hita tao anatin'ilay dika farany Ireo fepetra noraisina amin'ny maha tsy mitongilana ny aterineto sy ny fitsipiky ny fifandanjana, ary tsy ampy tao anatin'ny ampahany iray mikasika ny maha tomponantoka ireo mpanelanelana ny fiantohana dingana tsy mitanila ary ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fiainana manokana. INampidirina tao anatiny ireo fepetra manamafy ny zo amin'ny fiainana manokana sy manameloka ny fanarahamaso tsy ara-dalàna, saingy tsy misy filazàna mivantana amin'ilay mpandefa fanairana Edward Snowden sahala amin'izay namolavolan'ireo mpandray anjara sasantsasany azy.
Fanombohana iray mankahery
Ny ampitson'io, ny fihaionana dia niantomboka tamin'ny andiany maro tamin'ireo fanamarihana mivaivay sy voasaina tsara avy amin'ireoo olo-malaza iraisam-pirenena amin'ny Aterineto misokatra. Naniry ny mpisolo tena ny fiarahamonim-pirenena sivily, Nnenna Nwakanma, mba hisy ny fifampitokisana  eo amin'ireo ambaratonga rehetra ao anaty adihevitra mikasika ny fitantanana ny aterineto, izay, araka ny voalazany, dia nokikisan'ny fanangonana, ny fikirakirana ary ny fitsikilovana an'ireo fifandraisana. Nafantok'i Vint Cerf avy amin'ny Google tamin'ireo fikambanana fitantanana ny Aterineto ny fandraisany anjara, tamin'ny alalan'ny filazany fa mila apetraka ny mangaraharaha goavana sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ICANN ary ny fanamafisana ny famatsiambola ny Vovonana ho an'ny Fitantanana ny Aterineto. Tim Berners-Lee, ilay mpamorona ny Web, dia niantso ny mba hananganana aterineto tsy mitanila sy mba hiheverena ny fahalalahana maneho hevitra ho toy ny zo fototra ampiarahina amin'ny zo fiarovana ny fiainana manokana.
Nomarihin'ny fanapatapahana marobe nataon'ireo mpandray anjara ireo adihevitra, izay nampiseho sora-baventy mangataka an'i Ramatoa Rousseff mba hanao rangopohy ny Marco Civil (nataony izany tamin'ny 23 aprily) ary nijoro nanohitra ny fanarahamaso an'ireo mpanao Aterineto.
Ny teny hoe ‘mpiara-miombonantoka maro’ no teny nironana tamin'ny maraina (tahaka izay nasehon’ity sary fanehoana  avy amin'ny Ivon-toerana ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina ity) – saingy arakaraky ny namerenana imbetsaka ilay teny no tsy nampisy lanja ny famaritana azy. Nampitandrina hatrany am-piandohana i Nnenna Nwakanma fa lasa manjavozavo “ny hevitra fampidirana ny mpiuara-miombonantoka maro ary very ny heviny.”
Fanohanana sarintsariny ihany no nataon'ireo solontenasasantsasany avy amin'ny governemanta an'ilay fotokevitra, mialohan'ny nanamafisana tamin'ny fomba henjana tao anatin'ireo fanaparihana nataony ny andraikitry ny fanjakàna : i Abdullah Abdulaziz Aldarrab, Saodiana, minisitry ny Serasera sy Teknolojia, dia niantso ny Aterineto “ho zon'ny governemanta,” raha toa i Vinay Kwatra, sekretera lefitry ny Ministry ny Raharaham-bahiny Indiana, niresaka ny andraikitry ny governemanta ho toy ny “didy tsy afaka ny ho tsinontsinoavina” satria noho ny fihitaran'ireo andraikitra mahazatra nifamatotra tamin'ny fahefam-panjakàna lasa any anatin'ny habaky ny aterineto
Ahiahy nandritra ny fanoratana ny vakiraoka
Nihodinkodina teo amin'ny fandraketana an-tsoratra farany ny fivoriana ireo asa tamin'ny 24 aprily, dingana iray izay nitarika ny fifandroritana mafy teny anivon'ireo mpandray anjara. Raha tokony ho fampidirana hevitra marobe tao anaty lahatsoratra no natao, naleon'ilay komity avo lenta  voafantina namorona antontan-taratasy iray manakaiky ny “marimaritra iraisana ” teo amin'ireo antoko marobe mpandray anjara.
Navela ireo mpandray anjara mba hanara-maso fa tsy maneho hevitra tao anatin'ny efitrano fampahalalam-baovao nandritra ny adihevitra momba ny votoatiny nifanaovan'ireo mpikambana tao amin'ny komity. Nilaza ireo sasantsasany fa tafahoatra loatra tao anatin'ny efitrano ny fisian'ireo mpandresy lahatra avy amin'ireo orinasa goavana, ary mety nandray anjaran tamin'ny fahalemen'ireo fanapahankevitra ny fahavitsian'ny solontenan'ny fiarahamonim-pirenena sivily. Hita tao anatin'ny komity ireo solontena avy amin'ireo governemanta 12 mpampiantrano ny hetsika (Afrika Atsimo, Alemaina, Arzantina, Brezila, Korea Atsimo, Etazonia, Frantsa, Ghana, Inid, Indonezia, Tonizia, Tiorkia), ary solontena telo isaky ny vondrom-piarahamonina mpiara-miombonantoka : orinasa, anjerimanontolo, fiarahamonim-pirenena sivily sy vondrom-piarahamonina teknika amin'ny Aterineto.
Noraisina tamim-pahanginana ny tahirin-kevitra farany
ireo mpandray anjara mitazona sora-baventy manohitra ny fanarahamaso, tao amin'ny NETmundial. Sary Sarah Myers.
Rehefa natolotra ny mpihaino ny lahatsoratra nony farany, taraiky ora roa taty aoriana, tamim-pahanginana no nandraisan'ireo mpandray anjara reraka azy tamin'ny ankapobeny, niaraka tamina tehaka vitsy rehefa misy ireo filazàna momba ny fanarahamaso. Fankasitrahana kely teo am-pitsanganana no navalin'ny mpanatrika an'ireo fitsipiky ny fitantanana ny Aterineto tao anatin'ilay antontan-taratasy.
Niseho ho afa-po tamin'ireo vokatra ny filohan'ny ICANN Fadi Chehade. “Izay no fomba ananganantsika ny Aterineto ho an'ny rehetra,” hoy ny nambarany. “[Raha] te-handeha haingana dia mandehana irery, saingy raha te-handeha lavitra dia tsy maintsy miaraka. Noho izany ndeha isika hiaraka.”
Nampiato ny fankatoavany ilay antontan-taratasy ireo solontenan'ny governemanta sasany, anisan'izany ireo avy ao Kiobà, India ary Rosia, na samy milaza tsirairay aza fa gaga tamin'ny fizotrany.
Miteny amin'ny anaran'ny fiarahamonim-pirenena sivily, nilaza tamin'ny mpanatrika i Stephanie Perrin fa: “Omeanay anareo ny fanekenay izay tsy ho lavinay, ho tonga eo izahay… andrandrainay ny fatratra ny zanatohatra manaraka amin'ity dingana isian'ny tena fiaraha-miombonantoka ity.”
Raha tena mibaribary ny hadisoam-panantenana tamin'ny vokatra, ny fanehoankevitr'ireo mpandray anjara marobe dia nahitana taratra ny hevitra hoe ny tena fahombiazan'ilay fivoriana dia noho izy tanteraka. Nahavariana ny fahasamihafan'ireo solontena sy ny fidadasik'ilay dingana, izay namela ny maro handao ny NETmundial tsy araka izay nantenain'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/01/138082/
 dingana hahatongavana: http://bestbits.net/netmundial-response/
 Naniry ny mpisolo tena ny fiarahamonim-pirenena sivily, Nnenna Nwakanma, mba hisy ny fifampitokisana: https://twitter.com/nnenna
 ity sary fanehoana: http://ajantriks.github.io/netmundial/track_multistakeholder.html
 komity avo lenta: http://netmundial.br/hlmc/
 marimaritra iraisana: http://tools.ietf.org/html/draft-resnick-on-consensus-07